Share : 1,015
नेपाली समाज अहिले पनि छोरीचेलीलाई छोराजस्तै निस्फिक्री बाहिर निस्कन हत्तै दिँदैन । छोरीले घरको दैलो नाघेर हिँड्न खोज्दा सबैभन्दा ‘आमा’ नै चिन्तित् बनिदिन्छन् । त्यही चिन्ताले छोरीलाई घरभन्दा बाहिर निस्कन रोकिदिने घटना समाजमा अझै तमाम छन् ।
शारीरिक बनावट, केही आनीबानी र जैविक गुणबाहेक छोरा र छोरीमा हुने मानवीय गुण, हिम्मत, साहस र संघर्षको आँटमा भने तात्विक भिन्नता हुँदैन । सुषमा प्रधानले पनि पोखरा छोडेर काठमाडौंको यात्रा गर्नलाग्दा आमा टीकालक्ष्मी प्रधानले नै ‘हुन्न’ भनिन् ।
‘म फेसन डिजाइनिङ पेशालाई अगाडि बढाउन काठमाडौं आउन खोजेँ, आमाले हुन्न भन्नुभयो’, सुषमाले ती दिन सम्झिइन्, ‘पछि काठमाडौंमा रहेका दिदी–भिनाजुले सेरोल्याब ग्रुप अफ कम्पनीमा जागिरका लागि बोलाउनुभयो, आमाले ‘हुन्छ’ भन्नुभयो ।’ आमाको त्यही एक शब्द ‘हुन्छ’ले आज सुषमा करिब पाँचवटा संस्थाको प्रमुख जिम्मेवारीमा छन् । ३० जनाभन्दा बढी सहकर्मीको नेतृत्व गरिरहेकी छन् ।
पोखराको राष्ट्रिय माविमा अध्ययन गर्दासम्म सुषमा एक कुशल शिक्षक बन्ने सपना बुनेर हिँडेकी थिइन् । एसएलसी (एसइई) पास गरेपछि उनीमा दुविधा भयो– के पढ्ने र के बन्ने ? भन्ने । उनले बीबीएस रोजिन र पीएन क्याम्पसबाट बीबीएस पास गरिन् । उमेरले साढे दुई दशक टेकेकी सुषमाले त्यसपछि फेसन डिजाइनिङमा डिप्लोमा गरिन् । सिकेको शीपलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । ‘मैले पाँच÷छवटा फेसन सो गरेँ, पोखरामै’, उनले भनिन् ।
नयाँ ठाउँ घुम्न, नयाँ मान्छेसँग संगत गर्न रुची राख्ने सुषमालाई एक दिन सेरोल्याब गु्रप अफ कम्पनिज्बाट अफर आयो । उनले त्यो मौका गुमाइनन् । ‘हुन्छ’ भनिन् । पोखराकै लागि भनेर बोलाइए पनि पछि उनलाई कम्पनीले सेल्स एन्ड मार्केटिङ डाइरेक्टरको जिम्मेवारी दियो । अहिले उनी काठमाडौंमै बसेर देशभरीको मार्केटिङ हेर्छिन् ।
यो मात्रै होइन सुषमा मेडिसिटी अस्पिटलको डर्माटोलोजी एन्ड कस्मीटोलोजी डिपार्टमेन्टमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा कार्यरत छिन् । त्यहाँ डाक्टरहरुको सहायताले छालासम्बन्धी समस्या र मेसिनको माध्यमबाट शरीरको बोसो निकाल्ने सेवा प्रदान गरिने गरेको उनले बताइन् ।
उम्दो उमेरमै सुषमा नेपाल फर्टिलिटी प्रालीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सेभेन सेसन रिसोर्टको बोर्ड डाइरेक्टर र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा निर्माणाधीन ड्रिम अफ गार्डेन क्याफेकोसमेत प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा छिन् ।
कलिलो उमेर, एउटै व्यक्ति यति धेरै जिम्मेवारी कसरी व्यवस्थापन गर्छिन् ? जिज्ञासा स्वभाविक हो । जमाना टेक्नोलोजीको हो । उनी यसको भरपुर सदुपयोग गर्छिन् । ‘म फेसबुक, भाइबर, स्काइपको उपयोग गर्छु’, सुषमाले भनिन्, ‘धेरै कुरा म भाइबर, स्काइप र फेसबुकमार्फत सोधिरहेकी हुन्छु । हप्ता दिनमा हरेक संस्थामा पुगेर मिटिङ गर्छु । महिनाको अन्त्यमा रिपोर्ट मैकहाँ आउँछ, त्यसलाई हेरेर थप निर्णयमा पुग्छु ।’ सुषमाको कार्यशैलीले टेक्नोलोजी मानिसको दिनचरिया ‘बेकारको व्यस्त’ बनाउन होइन् उपयोगी काममा सहयोगी बनाउन हो भन्ने प्रमाणित गर्छ ।
सुषमाले विवाहका बारेमा अझै सोचिसकेकी छैनन् । राम्री, सुन्दर र सलक्क परेकी उनलाई प्रेम प्रस्ताव आउलान् कि नआउलान् ? देख्नेले सोच्नु स्वभाविक हो । ‘आउँछन्’, उनले भनिन्, ‘आयो भन्दैमा स्वीकार्दै हिँड्नु पनि भएन ।’ सुषमा प्रेमकै कारण करिअरतिर केन्द्रित भएकी हुन् । कुनै समय उनको कसैसँग प्रेम थियो । त्यो प्रेम झाँगिएन । फस्टाउन सकेन । उनलाई लाग्यो ‘केही गरेर देखाउँछु’ अनि लागिन उनी करिअर बनाउन ।
कामले कहिल्यै नअघाउने सुषमा सलुन गर्ने मुडमा छिन् । उनी मौका पाए मोडलिङ गर्ने सोचमा पनि छिन् । तर हिरोइन बन्ने चाहना भने उनमा छैन । ‘पाँच, सात वर्षपछि विहा गर्छु’, उनले भनिन्, ‘त्योभन्दा पहिला मेरो काम भनेको करियरलाई सकेसम्म माथि लग्ने हो ।’ फिट रहन के गर्छिन सुषमा ? विहान उठ्ने, सामान्य व्यायाम गर्ने, पानी पिउने, हल्का खाजा खाने र काममा निस्कने उनको नियमितता हो । ‘खाना म सकेसम्म घरकै खान्छु’, उनले भनिन्, ‘बाहिरको खाना त्यति हाइजेनिक लाग्दैन, घरको खाना स्वस्थ्य, साधारण र सफा हुन्छ ।’
क्षमता भए कमजोर हुनु पर्दैन भन्ने बुझेकी छिन् सुषमाले । त्यसैले उनी मौका पाएसम्म तालिम, वर्कशप छुटाउँदिनन् । ‘त्यसले आत्मबल बढाउँछ’, भनिन्, ‘म बोल्नै डराउने मान्छे, आज ठूल्ठूलो डिल गर्नसक्ने भएकी छु ।’ उनले ब्यांकिङ्ग एन्ड एकाउन्टिङ ट्रेनिङ लिएकी छिन् । युएसएबाट सेल्स एन्ड मार्केटिङ तालिम लिइन् । बीटीएल युएसएको कस्मेटिक थेरापी तालिम प्राप्त गरिन् । अप्टिमेडिकल युएसएबाट सेल्स एन्ड मार्केटिङ तालिम, माको फार्मा फ्रान्सबाट प्रोडक्ट ट्रेनिङ प्राप्त गरिन् । हेयर जर्मनी, चाइनाबाट प्रोडक्ट ट्रेनिङ देखि जापानबाट प्रोडक्ट ट्रेनिङ इन हेमेटोलोली तालिम प्राप्त गरेकी छिन् । सिकेर कहिले नसकिने मान्यता राख्ने सुषमा भन्छिन्, ‘हरेक सिकाइले नयाँ उर्जा र ज्ञान थपिन्छ ।’